Momba anay - Nortech Engineering Corporation Limited
NORTECH Engineering Corporation Limited dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy valizy indostrialy ao Shina, manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny serivisy OEM sy ODM.
miaraka amin'ny ekipa Sales any Shanghai, sy ny orinasa mpamokatra entana any Tianjin sy Wenzhou, Sina, dia manolotra vahaolana isan-karazany ho an'ny mpanjifantsika manerantany.
Ny tobim-pamokarana dia mandrakotra faritra 16000㎡ miaraka amina mpiasa 200 ary 30 amin'izy ireo dia injeniera sy teknisiana zokiny.
Tianjin Greatwall Flow Valve Co., ltd,mpanamboatra valizy ambony ambony any Sina, ivon-toeram-pamokarana valizy lolo, valve valves ary saringan, izay niasa ho mpanamboatra OEM ho an'ireo orinasan-tsivana mitarika izao tontolo izao.
Fitaovana maodely fanodinana vy & fanapahana, fanodinana ary fanandramana maherin'ny 100 ao anatin'izany ny milina CNC, NDT simika physio efa mandroso, fandalinana spectral, fanandramana fananana mekanika, mpitsikilo ny lesoka ultrasonika, gags matevina ultrasonika, manainga koa, fitaovam-pitaterana.
Voamarina amin'ny ISO9001, manaraka tsara ny fizotran'ny fanaraha-maso kalitao izahay.
CE / PED voamarina ho an'ny firaisana eropeana.
WRAS sy ACS voamarina amin'ny fisotroana rano, izay tsy maintsy atao amin'ny tsena any UK sy France.
Shanghai ES-Flow industrial Co., ltd,miaraka amin'ny trano fanatobiana entana, ekipa varotra ary fanohanana ara-teknika, manana sehatr'asa ho an'ny tahiry, fihenam-bidy ary fizarana valva, ary koa ny vahaolana fanaraha-maso ho an'ny mpanjifanay.
Miaraka amin'ny tahiry be an'ny faritra valves sy valves feno ihany koa dia afaka manome toky ny fotoana fitaterana fohy izahay.
Ny kalitao azo antoka sy ny fandefasana haingana dia mampiavaka antsika amin'ireo mpamatsy valizy an-jatony any Sina.
Vokatra fototra anay: valizy voavoly, valizy lolo pneumatika, valizy lolo elektrika, valizy baolina pneumatika, valizy valin-jiro, valizy vavahady, valizy vavahady, valizy eran-tany, fantsom-pitaovana sns.
Ny sehatry ny orinasa
Famolavolana sy famolavolana
Fametrahana valve, labling ary fonosana
Valve actuation, manamboatra sy reconditioning
Eo amin'ny fanohanan'ny tranonkala
NORTECH valves dia naondrana tany Amerika, Eropa, Moyen Orient ary Azia atsimo atsinanana, izay manome fahafaham-po ny mpanjifanay amin'ny kalitao sy serivisy tsara.
Mino izahay fa ny kalitao avo lenta, ny vidin'ny fifaninanana ary ny serivisy fandinihana no tena manohana anao.
ny castings rehetra dia omena avy amin'ny ambony ambony metaly misy ISO9001 fanamarinana.
Ny faritra misy valiny vita amin'ny masinina dia miantoka ny tselatra miasa farafahakeliny sy ny androm-piainan'ny asa maharitra.
izahay koa dia miara-miasa amin'ny mpanamboatra valiny ambony hafa any Sina, miaraka amin'ireo mari-pankasitrahana rehetra, ao anatin'izany ny ISO9001, CE, ATEX, Firesafe.